Homeशिक्षाअब छोराछोरी नपढाउनेलाई पच्चीस हजार जरिवाना !
August 23, 2018 Spnews शिक्षा, समाचार Comments Off on अब छोराछोरी नपढाउनेलाई पच्चीस हजार जरिवाना !
काठमाडौँ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
श्रीमती पीडित पुरुषहरुको अदालतमा भिडः एकै दिन एउटै अदालतमा पाँच मुद्धा !
दैवको लिला पनी कति निर्दयी: सधैका लागि छुटायो यो कलिलो जोडीलार्इ